कथा-श्रीमती नभएका सर – Janamanch.com
जिल्ला वन कार्यलयमा खरदारको जागीर छ । घर तराई हो तर जागीर पोखरामा छ । एक्लै बस्ने गर्छु कोठा भाडामा लिएर । आज पनि आफिसबाट आउन साथ शरीरको थकानले होला रक्सीको याद आयो । मासु र काक्रो ल्याएर सितन तयार पारे । रात परे पछि मात्र रक्सी लिन जानु पर्छ किनकी घरबेटि वा वरिपरिकाले देखे नराम्रो सोच्लान भन्ने डरले रात कुरे ।
एक बेला देखेको थिए साहूजीले कोरिया भाषाको किताव पाढिरहेका थिए । “साहुजी के हो हबाईजाहज चढने नै हो ?” मैले हास्तै सोधेको थिए । साहूजी बोल्नु भन्दा अगाडि साहुनी बोलिन्, “जादैनन् सर यी बिदेश । पास गरे नि म पठाउदिन । प्यार गरे पछि एक्लै पार्न मिल्छ ?” साहुजी हाँसे मात्र । पछि साहुजी बिदेश गएनन् सायद साहुनीले दिइनन् होला ।
“रक्सी छ दिदी ?” मैले पसलको सटर छेउको धारामा भाडा माझ्दै गरेकी साहुनीलाई पसल बाहिरै बाट सोधे ।
“भित्र जानुहोस् न कान्छाले दिन्छ ।” म भित्र गएपछि फेरी बहिरबाट साहुनीले भनिन् “कान्छा ! सरलाई एक बोतल रक्सी हाली देउ त । ”
“बोर्डिङ स्कुलको फि कति महँगो हो । एउटा छोरो पठाउन पनि धोउ धोउ भोइसको । ” एक चुस्की रक्सी खाँदै ति महिलाले भनिन् ।
“कमाएर मात्र हुन्छ त अनि अलि खर्च नि गर्नु परो नि । ” साहुजीले मुस्कुराउँदै बोतलमा रक्सी हाल्दै भने ।
“तिमीहरु जस्तो दुई दुई जना छैन आफ्नो कमाउने । के गर्नु । म एक्लै छु ” महिलाले भनिन् । “दुई जना हुन त, बुढो लाई मनाउनु परो नि । झगडा गरेर हुन्छ ।” साहुजी बोले ।
“तिमी जस्तो बुढो भए पो । पोइलो जाने बुढोलाई कस्ले मनाउछ । तरुनी खेलाउन पल्केको । अर्की ल्याएर बसेको छ रे काठमाडौंमा । नाम पनि लिन मन लाग्दैन त्यस्ताको । ” महिलाले भनिन् ।
“अनि तँ पनि जा न अरु सँगै । भेट्छेस् नि कोहि न कोहि त राम्री छेस् । उमेर छ ।” बाहिरबाट भाडा माझेकै ठाउँबाट साहुनीले मुस्कुराउँदै भनिन् ।
महिला धेरै समय सम्म हाँसिन अनि बिस्तारै लजाबती स्वरमा बोलिन् “के के भन्छे यो माइली पनि । ” उनको रातो अनुहारले उनी लजाएको प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
केही छिन् सबै मौन रहे । केहि समय पछि ति महिला बोलीन् “धेरै भएको थियो है म यहाँ नआएको ?”
“दिउँसो आउनु पर्छ नि । राती त गफ पनि धेरै गर्न पाइदैन । मलाई त अहिलै निन्द्रा लाग्ला जस्तो भएको छ । दिनभरी पसलमा उभिदा थकाई लाग्दो रहेछ । ” साहुनीले भनिनन् ।
“दिउँसो त ब्यूटी पालर्र जानु परो नि । बसपार्कमा पालर्र खोल्या छु । साँझ सम्म चल्छ पसल । फर्किदा कहिले गाडि भेटिन्न । तनाव हुन्छ ।”
“अनि फर्कदा कसरी आउछेस् त ? गाडी नपाउँदा ?” साहुनीले सोधिन् ।
“गणेश सरलाई बोलाउँछु । बाइक लिएर आउनुहुन्छ । कति सहयोगी हुनुहुन्छ । हाम्रो घर कै रूममा बस्नु हुन्छ ।” यो भन्दा उनको अनुहारमा खुसि झल्किएको थियो ।
“कति दुःख दिन्छेस् , बिचरा सरलाई । जे काम पनि गणेश सरले गरेको भन्छेस् । दिक्क मान्नु हुन्न सरले ?” साहुनीले माझेको थाल मिलाउँदै भनिन् ।
“सरलाई धेरै जसो मैले नै खाना खुवाउँछु । एक्लै बस्नुहुन्छ । दिक्क मान्नु हुँदैन सरको पनि श्रीमती छैन नि त ।… ” महिलाले यति भने पछि म अनायसै मुस्कुराउन पुगेछु । ती महिलापनि मुस्कुराउँदै गिलासको रक्सी पिऊन लागिन् । इलाम